Oromia: #OromoProtests: Gabaasa Fincila Xumura Garbummaa (FXG) Oromiyaa 2016 (September) | OromianEconomist
Oromia: #OromoProtests: Gabaasa Fincila Xumura Garbummaa (FXG) Oromiyaa 2016 (September)	September 30, 2016
Tags: #OromoProtests, Africa, FXG, FXG Oromiyaa, Oromia, Oromia: #OromoProtests: Gabaasa Fincila Xumura Garbummaa (FXG) Oromiyaa 2016, Oromo
The Grand Oromo Rally at the World Bank: #OromoProtests at World Bank Group, Washington DC, while Mr. Secretary listening and receiving an appeal letter, watch the video.
The Grand Oromo Rally: #OromoProtests Global Solidarity Rally and Opposing Mass Killings by Ethiopia’s Fascist (TPLF) regime
To the UN Security Council: a plea to intervene to Stop the Bloodshed in Ethiopia, Please click here and sign the petition
Athletic Nation Report: In Solidarity with the Oromo Protests athlete Hirut Guangul makes powerful gesture in 4-peat. #OromoProtests
Honourable AnthonyBryan, MP, presenting in Australian Federal Parliament about the ongoing oppression of the Oromo Peoples. 15 September 2016.
Read at World Policy Journal: Ethiopia’s Original Sin. Click here.
Oromia: #OromoProtests Alerts! Crimes Against humanity:Fascist Ethiopia’s regime has continued with mass killings of Oromo children: “They made me sit on my son’s dead body & tortured me” said a mother: Reeffa Mucaa Koo Irra Taa’i Naan Jedhanii Achi Irratti Na Tuman: Haada Mucaan Duraa Ajjeefame
VOA: Congressman Smith and Athlete Feyissa Lelisa at Capitol Hill. #OromoProtests
Ethiopia’s Hajin Tola won the inaugural CanKen 5K road race in Mississauga, Ont. on Sunday and performed a political protest by crossing his wrists to form an “X.”
September 19th, 2016 by Tim Huebsch, Running Magazine
Oromia: Athletic Nation World Report: The Rio 2016 Paralympic: Athlete Tamiru Demisse showed solidarity with #OromoProtests against the tyrannic Ethiopia’s regime as he claimed a silver medal, following a protest gesture made by Olympic counterpart Fayyisaa Leellisaa (Feyisa Lilesa). Gootichi Oromoo AtleetTaammiruu Demisee Paralympic Riyoo tti tibba injifate mallattoo mormii Oromoo agarsiise.
Open Democracy: The ‘Ethiopian Spring’: “Killing is not an answer to our grievances. #OromoProtests
The regime in Ethiopia (Fascist TPLF) has lost any semblance of humanity
Daily Mail: Unrest mars Ethiopia’s New Year, Eid parties. #OromoProtests and the Market Boycott in Action
Press Statement of the African Commission on Human and Peoples’ Rights on the Human Rights Situation in Ethiopia. #OromoProtests
Human Rights Watch: Civil Society Organisations: Joint letter to UN Human Rights Council on Ethiopia
EurActiv: European Commission: No Emergency Trust Fund money goes to Ethiopian government, Commission stresses
TRT WORLD Ethiopia’s #OromoProtests, September 1, 2016
Human rights abuses in Ethiopia require congressional action, Congress Blog, 31 August 2016
The Guardian: Olympic medallist Feyisa Lilesa’s gesture was a plea for justice for his people.Click here to read at Oromian Economist, 24 August 2016
Athlete Fraol Ebissa Won the Germany 10Km and shows his solidarity with #OromoProtests. 4 September 2016
Fiigicha km 10 Fulbaana bara 2016 biyya Jarmanitti godhame irratti Atileetiin dhalataa Oromoo Fraa’ol Eebbisaa injifate. Innis akkuma atileetota kanii mormii mootummaaa gabroomfataa irratti qabu Addunyaatti agarsiiseera.
Atileet Firaa’ol dorgommii adda addaa irratti yeroo baayyee injifachuun goota Alaabaa keenya dhugaa ol qabaa turedhaa.
Another Oromo athlete Demissie Tamiru repeats the #OromoProtests gesture at Rio Paralympics on 11 September 2016.
Gootummaan Oromoo gandaa,aanaalee fi guutuu Oromiyaa irra darbee hamma adduunyaa biyya lafaa raajutti itti fufee jira. Atileet Taammiruu Dammisee seenaa galmeesse!
Throwing up the “X” in parliament, Swedish MP Mr. Anders Österberg asked the Sweden Government to break silence on killings of Oromo & Amhara protesters in Ethiopia. 30 September 2016.#OromoProtests
Sean John Combs also known by his stage names Puff Daddy, Puffy, Diddy, and P. Diddy, is an American Hip Hop Recording Artist, Record Producer, Entrepreneur and Actor showing his support for Ethiopian Human Rights Global Movement.
Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo (SQ) Qophii Fulbaana 30, 2016
September 30, 2016 By Qeerroo
Godina Baha Wallaggaa HORROO ALALTUUTTII dargaggoon 8 qabamanii hidhaan akka dararamaniif Darbarfamanii Kennaman.
Fulbaana 30,2016 ,Dargaggoota kana hidhaaf kan dabarsee kennee fi waraana Agaazii TPLFn akka qabaman kan taasise kaabinoota OPDO
1 ,Addisuu Saaqqataa kantibaa
2,Waggarii Dhabaa Durata aa gandaa
3,Badhasaa jalduu dhimmanagenyaa kanneen olii sadan kunneen lukkeewwaan Wayyaanee ta’uun dargaggootaaf maatii dargaggootaa hiraarsaa jiru
Poliisota Ijoollee kana qaban Continue reading →
Qeerroon Baadiyaa Wallaggaa Keessa Jiran Diddaa Sirna TPLF Itti Fufan!
MATAKKAL WAMBARAATTI FINCILLI ITTI FUFEE JIRA!
Fulbaana 30,2016, Odeessi Qeerroo Gaalessaa akka addeessetti ilmaan Oromoo Godina Matakkal Wambaraa gaaffii eenyummaa isaanii dhiyeessaa akka jiran hubachiisuun,Ayyaana Masqalaa irrattis Qeerroon Aanaa Gaalessaa Walleelee Aadaa fi Warraaksaa weellisuun gaaffii eenyummaa isaanii dhiyeessan!
Ergamtootni murna Xinnoo kanaa, Marsariitii Waajjira Komunikeekeeshinii Aanaa Gaalessaa irrattis, Uummati_Shinaashaa_Afaan_Oromootiin sirbuun ayyana masqalaa kabajan jechuun gaaffii eenummaa uummata Matakkal
Gaalessaa haauuf yaalanii jiru. Continue reading →
Hiriira Hagayya jahaa irratti kan qabaman ilmaan Oromoo 17 mana murtii Qirqoos/Golbootti dhiyaatan‏
Fulbaana 30,2016,Wanbadeen Murna TPLF guyyaa har’aa hidhamtoota 45 keessaa 17 mana murtii magaalaa Finfinnee Cirqoostti(Golbootti) dhiyeessuun, Onkoloolessa 09,2016tti beellamee jira.Himatamtoonni kun badii tokko mlee,hanga har’aa kan hiraarsamaa jiran yeroo ta’u Hiriira guddicha Oromiyaa Hagayya jahaa irratti qabamuun isaanii ni yaadatama! Continue reading →
OromoProtests at the World Bank Group, Washington DC, while Mr. Secretary listening and receiving an appeal letter.
September 30, 2016 By Qeerroohttps://www.facebook.com/v2.3/plugins/video.php?allowfullscreen=true&app_id=249643311490&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FP5DLcu0KGJB.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df1e01f52642f39%26domain%3Dqeerroo.org%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fqeerroo.org%252Ff10dd116dcbaa4c%26relation%3Dparent.parent&container_width=550&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkebede.feda.1%2Fvideos%2F10207642334760817%2F&locale=en_US&sdk=joey
September 30, 2016 By Qeerroohttps://www.facebook.com/v2.3/plugins/video.php?allowfullscreen=true&app_id=249643311490&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FP5DLcu0KGJB.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df201c20912cd138%26domain%3Dqeerroo.org%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fqeerroo.org%252Ff10dd116dcbaa4c%26relation%3Dparent.parent&container_width=550&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FOromiaMedia%2Fvideos%2F1820963361449856%2F&locale=en_US&sdk=joey
The Grand Oromo Rally, September 29, 2016, #OromoProtests
FXG Guddicha Godina Wallaggaa Horroo Magaalaa Giddaa Ayyaanaa Fulbaana 29,2016
September 29, 2016 By Qeerroo https://videopress.com/embed/PCfMov2y?hd=0&autoPlay=0&permalink=0&loop=0Wallee Warraaqsaa Sabboontuu Dirribee Jifaar
September 29, 2016 By Qeerroo
September 29, 2016 By Qeerroo https://videopress.com/embed/ODD0mFxj?hd=0&autoPlay=0&permalink=0&loop=0
#OromoProtests, September 28, 2016
#OromoProtests 28 September 2016: Massive rally in Mandi West Walaga following funerwl service for Sanbata Imana who was killed while celebrating Meskel two days ago
September 28, 2016 By Qeerroohttps://videopress.com/v/5iVFEOTW?hd=0&autoPlay=0&permalink=0&loop=0
September 27, 2016 By Qeerroo
#OromoProtests 27 September 2016:
A meeting called by TPLF’s puppets in Oddo Shakkiso district in Guji Zone turns into fierce protest as elders stand up and denounce the regime and vow to fight to death
Godina Gujii aanaa Oddoo Shaakkisoo ganda Magaadoo keessatti walgahiin uummataa mootuummaan waamee gara mormii uummataatti jijjiirameera. Guyyaa kaleessaa Fulbaana 26, 2016 yookiin fulbaana 16, 2009tti, uummanni gaaffiiwwaan ciccima mirgaa abbaa biyyummaafi qabeenyummaa gaafachaa turane. Walgahiin mootummaan yaame kun gara mormiitti jijjiiramuun guutumaa gututti injifannoo ummataatiin xumurameera.
Birraan baranaa kan bilisummaatti. #OromoProtests during Irreechaa season. September 2016
Qabsoonis barannoonis itti fufa. #OromoProtests 27 September 2016
OromoProtests, East Hararghe, Biabbile, 27 September 2016
#OromoProtests, in South Korea an Oromo woman stands solidarity with Oromo Protests, 24 September 2016
OromoProtests, in Egypt, Cairo, solidarity with Oromo Protests on world Peace Day, 24 September 2016
#OromoProtests in Arsi (Dodolaa and Seeru) Oromia, 24 September 2016
Godina Arsii Dodolaa fi Seerutti keessatti Fulbaana 24, 2016 mormiin FXG gaggeefamaa oole.
Guutoo Giddaa Magaalaa Ukkee Barsiisonni Leenjii Dabbalootaa TPLF Dura Dhaabbachuun Haala Boonsaan Xumuran
September 24, 2016 By Qeerroo
Godina Wallagga bahaa Aanaa Guutoo giddaa Magaalaa Ukkeetti Leenjiin barsiisotaa kan torban lamaaf ture har’a Barsiisonni keenya
injifannoodhaan Xumuraniiru…Guyyaa walga’iin kun eegale irraa kaasuun barsiisonni mana barumsaa ukkee sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa
Mootummaa nama nyaata kana hadheeffatanii mormuudhaan Mujula kana hin dubbifnu jechuun harkatti didanii Mormii bifa callisuutiin
Xumuraniiru. Haalli kun waan garaa isaan gubeef Sabboona Barsiisaa Akkawaaq Jalduu kan jedhamuun Gaaffii qabdaa, hindubbattuu jedhanii
gaafannaan Sababan Dubbadheefan Xoollayitti hidhame jedhee deebiseef..
Waldaan Guutuu Wangeela Magaalaa Naqamtee Loltoota Wayyaanee TPLFn Goolamaa Jirti,Tajaajiltooti Waldichaas Hidhamanii Jiru.
Fulbaana 24,2016/ Warraakasa biyyoolessaa baatii 11 Oliif akka abidda saafaatti finiinaa tureen kan rifate mootummaan garboonffataau murna bicuu Wayyaanee aangoo isaatti fayyadamuun ilmaan oromoo sabboontota ta’aniifi tajaajiltoota wangeelaan maaliif uummataaf kadhattu jechuun magaalaa Naqamtee keessaa jumlaan mana adabaatti guuraa jira.
Haaluma kanaan mootummaan abbaa irree(TPLF) yakka isaa ajeechaa fi doorsisni inni ummaata biyyaatirraan gahaa ture itti xinnaannaan amma immoo abbooti amaantii sabaaf kadhataan akkasumas uummata isaaniif kan quqqamaan yakka tokko malee mana adabaatti guuraa jira.
Hanga ammaattis tajaajiltoonni waldaa guutuu wangeelaa kan magaalaa Naqamtee keessa jiran keessaa namoonni heedduun hidhamaa jiru.
Teessoon waldaa guutuu wangeelichaa kan inni keessatti argamus 07 keessa yemmuu ta’u namni tajaajiltoota wangeelaa kanarratti yakka duguuggaa sanyummaa raawwachaa jirus nama maqaansaa Fiqaaduu Takilee jedhamuudha.
Yakkamaan kun Waldaa guutuu wangeelaa keessaa nama tajaajilamuuf deeme fakkaachuun tajaajiltoota kanaan Yaa waaqayyo mootummaa kana nurraa buqqisi jechuun kadhattan jedhee mana hidhaatti guursisaa akka jirus baramee jira.
Bifuma walfakkaatuunis yakkamaan Fiqaaduu Takilee jedhamu kun tajaajiltoota kanaan maqaa meeshaa waraanaa guutummaa magaalaa naqamtee keessatti dhukaafamaa jiru isintu maallaqa walitti qabee bitaa jira maqaa jedhuun tajaajiltoota kana mana hidhaatti guursisaa jira.
Kanumaan wal qabatees tajaajiltoonni maqaan isaanii kanaa gaditti eerame mana hidhaatti kanneen gidduuma kana qabamanii jiran keessaa:
Zerihuun Imiru hojiin isaa tajaajilaa guutuu wangeelaa magaalaa Naqamtee.
Kennsaa Alemuu hojiinsaa tajaajilaa guutuu wangeelaa.
Fayyisaa Tashomee hojiin isaa tajaajilaa guutuu wangeelaa.
Kennasaa Darajee Hojiinsaa tajaajilaa guutuu wangeelaa
#OromoProtests, September 24, 2016
#SilentProtest at teachers indoctrination conference continues. #OromoProtests September 2016
OromoProtests, September 22, 2016, Click here at Ayyaantuu News.
Godina Wallaggaa Magaalota Qassoo,Moxee fi Yaamaa Hagaloo Jedhamu Keessatti Diddaan Sirna TPLF Itti Fufee Jira.
September 21, 2016By Qeerroo
Fulbaana 21,2016 Godina Wallaggaa Bahaa Magaalaa Qassoo naannawaa mana barnoota sadarkaa lammaffaatti alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo erga fannisanii booda, magaalicha guyya gabaa roobii waldaldalaa oolee wajjin ta’uun hanga halkan kanaatti mormii jabaa geggeessaa jiru.
Achuma Magaalaa Aanichaa Magaalaa Moxee irraa humnk waraanaa bakkichatti sochoosamaa fi tarkaanfii fudhachuu akka qaban ajjeechaa
ilmaan Oromoo irratti raawwachuuf tiki aanaa Waamaa Hagaloo Obbo Girmaa Gurmeessaa fi Tasfaayee Bantii akkasumas namni yeroo hedduu
uummatatti roorrisuun beekamu kaabineen tikaa Wayyaanee Takkaalliny Lammaa jedhama irratti walii galanii waraanni dhiiga uummata nagaa
akka lolaasuuf irratti walii galuu isaanii fi konkolaataan dhaqanii akka uummata goolan waajjira keessattiwal dhabuu. isaaniillee odeessi
waajjiricha keessaa ba’e dabalee addeessee jira.
#OromoProtests Fulbaana (September) 21, 2016: Guyyaa har’aa godina Aarsii Lixaa Aanaa Nansabooti magaala Garaambaamooti barsiisoonni wal gahii wayyanee dhiitanii bahaniiru.
“Barsistonni B/M/ Sabbataa leenjii keessan dura xalayyaa daballii mindaa keenyaa fi kan ji’a 3 dura isa ittin nusossobdan maalirra akka jiru nubeesiftan malee mata duree tokko nutti hinkaasiinaa jedhani didda isaani itti fufanii jiru. Akkuma siyaasa keessaniif dhimmitan dhimma keenyaafis xiquma dhama’aa hamma kun jala muramee nutti himamutti waan tokko illee waliin hindubbannu jedhanii addaan bittinanii jiru. Mana barumsaa sad. 2ffaa barattoota 1,000 maatriki kutaa 10ffaa fudhatan keessaa barattoota 86 qofaatu qabxii pp galchu fide jedhanii barsiisonni kun akkamitti ilaallama qormaanni bara kanaa akkamitti ilaalameet kan bara dhufuuf dubbanna jedhani OPDO cinqaa oolan.”
#OromoProtests, SilentProtests, Fulbaana (September) 20 bara 2016:
Barsiisonni YuunvaristiiFinfinnee walga’ii kaleessa eegalan!!
Jalqabuun dura yaada namoonni tokko tokko kennaniin warra walga’ii geggeessu hinqaban jenee harkaa buufne jedhan! Walga’ii eegaluuf jennaan, uummata keenya gochaa gara – jabeenyaan ajjeefamaniif yaadannoo sammuu gochuun yaa eegallu, waan biraa waan goonu hinqabnuu ishima kanallee nurraa yaa argatan jechuun yaadannoo taasifnee akka eegallu ta’ee jira!
Itti fufuun, namoonni hedduun gaaffii barsiisonni gaafatan qofa dhaggeeffachuun ennaa jarri waltajjiirraa deebii kennuu eegalan ka’anii deemu! Waggaa 25 f deebii nuuf deebisaa turtan har’as nutti himaa jirtu! Kuftanii jirtu waan ta’eef hatattamaan aangoo gadi dhiisuu qabdu jechaanii jiru barsiisonni Yunivarsiitii Finfinnee!
Jabaadhaa Hayyoota Oromoo!!
Denmark global solidarity rally with OromoProtests, 21 September 2016.
#OromoProtests Fulbaana 20, 2016: Arsii Lixaa Dodolaatti, qeerroon Ganda Qacama Caree guyya har’aa tarkaanif jajjaboo lukkeelee woyyannee irratti fudhannee jirra jedhu.
OMN: Oduu Fulbaana 20, 2016
OMN: Oduu Fulbaana 19, 2016
Well that is TPLF’s calculation. They are still using that very old calculator left behind by Meles. The input, the machine and the output is off the mark. Jawar Mohammed, 21 September 2016
#OromoProtests, September 19, 2016, Ayyaantuu News.
Ogeeyyiin Fayyaa Ilmaan Oromoo Qabsoo Oromoo utubuuf kan ammaa caalaatti hojii aantummaa hojjechuu akka qaban, Dooktoroonni fi Ogeeyyiin Fayyaa Miseensa Qeerroo ta’an waamicha dhiyeessan!
September 20, 2016 By Qeerroo
Ogeeyyiin fayyaa kun Hospitaalota irraa walitti dhufanii yaada gurmuu qeerroo isaaniif kennaniin, bara 2014 keessa utuu ogeeyyiin ilmaan Oromoo irraa dhalatan hedduu ta’anii jiranii FDG yeroo sana Oromiyaa keessatti ta’een Qeerroon Oromoo diinaan rukutame,yaalii tokko malee guyyoota sadii booda du’uun isaa kan nama gaddisiisu qofa utuu hin taane,hanqinaa gama keenyaan jirudha jedhan!
Yeroo ammaa kanas,murni alagaa ilmaan Oromoo abiddaan gubee gara hospitaala Abeet dame Hospitaala Phaawuloos erga fidee booda,hojjettoonni Hospitaalichaa fi Hospitaalota maraa dhimma hojii tiif gara Hospitaalichaa akka hin seenne taasisuun, kanneen gamoo Hospitaala Abeet irra keessa dhaabbatan kutaa reeffaa kan jala jiru keessatti reeffa namoota abiddaan gubamanii suura kaasuuf yaaltan maqaa jedhuun hojjettoonni hojiirraa arii’aman! Yeroo ammaa kana hojjettoonni kutaa reeffaa keessaa mana callabbeessaa keessatti reeffa ilmaan Oromoo abiddaan gubamanii eegaa jiran dararaa fi sodaachisa tika mootummaa Itoophiyaarraa halkaniif guyyaa boqonnaa dhabuurraan kan ka’e mana isaanii akka gadhiisanii fi kanneen mana qaban immoo mana galanii maatii isaanii wajjin bulaa akka hin jirre dubbataniiru! Continue reading →
Godina Wallaggaa Aanaa Guutoo Giddaa Magaalaa Ukkee Keessatti Dararaan Wayyaaneen Uummata Irratti Babal’ate
Gochi Wayyaaneen uummata Oromoo irratti raawwachaa jirtu daran daran haadhaa daangaa hin qabne keessa seenee jira. hidhaan adabuun hanqatee qeensa dargaggootaa hanga bubuqqisuuf gara laafina dhabuufiitiin geggeeffamaa jira,darggaggoo Kanneen armaa gadii Magaalaa Ukkee keessatti dararaa guddaa irraan gahaa jiru.
1-Indalkachew kan qeensa irraa buqqisanii reebichaan dararame
2,Takilee…kan maqaa abbaasaa hin baramin
3, Obsa xilahun dafaa….
4- Obbo xilaahun dafaa bulchiinsa magaalaa ukkeeti hojjetaadha. Abbaa obsaati..meeshaa isaani irraa fuudhame kan jiru Continue reading →
Fulbaana 18,2016 Godina Arsii keessatti Wayyaanen dargaggoonni ayyaana irreechaa irratti argamuuf akka hin yaanne jechuun maatii dargaggootaa doorsisu eegalee jira.
September 18, 2016 By Qeerroo
Fulbaana 18,2016 Godina Arsii keessatti Wayyaanen dargaggoonni ayyaana irreechaa irratti argamuuf akka hin yaanne jechuun maatii dargaggootaa doorsisuu eegaltee jirti.guyyaa har’aa fulbaana 17/2016 Magaalota akka Shaashamannee, Adaabbaa, Ajjee, Waabee, Nageellee, Seeruu, Dheeraa, Itayya, Hamdaa, Siree, Gobeessa fi kofaleen keessatti wal gahiin dhimma ayyaana irreechaa ilaallatu jechuun wayyaanen waamtee manguddoota doorsisaa oolte bakkoota heddutti manguddoonni dheekkamsaan ergamtoota wayyaanee salphisuun.erga yoomii as dargaggoota ayyaana irreechatiif jedhee galmeessuu eegale bakka ilmaan Oromoo itti wal gayanitti argamuuf galmeen maaf barbaachise.ummata oromoo ka lubbuun jiru dhiisaa ka ficcisiiftaniif waan yaadaa jirtan nutti himaa erga biyya bulchaa jirra jettan jechuun gaafilee ciccimoon Afaan qabsiisun addaan bayuun isaanii dhagayame.kuni kanaan osoo jiruu guyyoottan hafanittis maatii dargaggootaa doorsisuuf kaabinoota hanga gandoota baadiyyaatti bobbaasun isii dhagayamee jira.
Gama biraan Magaalaa Naqamtee Halkan kana dirree Waraanaa fakkaatti naannoo Ganda 05 tti dhikaasni dhaga’amaa Jira, qaama hin beekamnen Agaazii haleelaa Jira
Waldaan Christian Oromoo Magaalaa Finfinnee. – Oromo Christian church in Finifinnee, Oromia, in solidarity with #OromoProtests, 11 September 2016. The church held New Year prayer and solidarity with our people.
Teachers who are forced to participate in the 10 day indoctrination conference are engaged in #SilentProtest by refusing to ask, answer of comment. They are also boycotting food provided by the regime.
“Hirmii hin nyaannu!!” #OromoProtests September 2016
“Yuniavrsitii Wallaggaa Kampasii Shaambutti diddaan barsiisonni caldhisuun godhan itti fufee jira. Nama Dr. Balay Shifara jedhamuu mqaan waamtee dubbisuuf yaallaan waci eegalee achumaan dhiisan. Amma laaqana esheen qopheessites lagannee jirra.” #OromoProtests 15 September 2016
“Leenjii Barsiistota irratti Barsiistonni Kolleejjii Polii Teeknika Bishooftuu fi koolleejjiwwan dhuunfaa magaalichaa bakka yokkotti bakka leenjii koolleejjii poli Teeknika bishoftu keessatti hirmaachiseen Barsiistonni CALLISUUN DIDDAA giyyaa guutuu waan tokko otuu hin dubbatin hafanii waan ajaa’ibaati
Jarri nu teechisan keessaa obbo Caalii Xiiqii, Leggesee, fi itti aanaa diinii koollejjii pooli teeknika bishooftu kan ta’e Sulxaan ciigoo kan jedhaman dubbadhaa , yaada qabduu ……… cicci xumaaxum namni tokko dubbatu dhabamee jennaan kan duursanii warra afaan oromoo dubbatuuf hin dandeenye adda baasaanii otuu jiranuu waan jedhan wallaallan warri afaan hin dandeenye jirtu? Mee kan afaan oromoo dandeechan harka baasaa jechuun, Barssiisyonni afaan oromoo akka danda’an ibsachuuf otuu hin dubbatin harka baasan, eegas jedhan amma warri harka baastan maqaa waamanii dubadhaa jedhanii gara dirqiittis hoofuf jennaan Barsiistonni sagalee wal fakkaatun kolfa guddaa daqiiqaa walakkaaf ta’u kolfuun erga yokko deebisanii callisan guyyaan saa akka habashaatti 04/01/2009.” #OromoProtests 15 September 2016.
#OromoProtests 16 September 2016, SlentProtests: Dabballoonni Wayyaanee waan cinqii keessa galte fakkaatti.
Har’a Godina Arsii Aanaa Honqooloo Waabeetti, dabballoonni leenjii barsisootaa kennan waliin hasa’aa turan. Kunis barsiisoonni walgahii teechisaan nu jalaa dubbachuu didan jedhanii haasa’u.
☞yaada kennaa jennaan, cicci
☞waraqicha dubbisaa jennaan, cicci
☞gaaffii gaafadhaa jennaan, cicci
☞adeemsa jijjiirruu jennaan, cicci
☞qarshii 50,000 (kuma shantama) isiniif welcome qopheessine akka aanaatti jennaan, cicci
☞Mee anumaa arrabsaatii asii na ari’aa jennaanis, cicci,
cicciin cicumaan dhumte.
Kanaafuu,jarri rakkoo garaadha qabdi jenne, maal wayya? jedhanii mari’achaa jiru.”
“Barsiisonni magaala finfinnee kutaa magaala kirkos keessatti kan argaman keessaa Mana barumsaa qophaa’ina Abiyoot kirsi(jiisee). leenjii eegaluun dura wareegamtootaaf kadhannaa sammuu daqiiqaa tokko gochuudhaan jalqabani.Akkasumas barsiisonni mana barumsaa Misiraaggootti hirmaatani keessaa dareen tokko dhaggeeffachuu didanii rafnaan yookaan hirmaadhaa yookaan immoo gad bahaa jennaan barsiisotni jechoota ulfaataa itti lakkisanii of irraa arii’aniiru hanga ammaatti namni sadii ol itti jijjiiramus yaada kennuu hin dandeenye qondaalota Tplf harkatti fashaleessaniiru kun injifannoo guddaadha galatoomaa nuuf jedhaa.”
“Lenjii barsisota motumman wayyane qophesiite irratii caliisuun barsisoota univeristy science fi technology adama kessattis akkuma itti fufet jira. bayye kan nama aja’iibu yaada kenuu diduu barisoota qoffaa osoo hin ta’iin yeroo waltajii irra ergaamooni dina oddesituu barsisaan dhagefatuu tasuum hin jiruu. barsisoon bayeen walgahii kessa ta’iin mobile issan irra facebook fayyadamuu, gariin immo ni rafuu, gariin immo dabaaramani ta’uu, waluuma galaati walgahiichi bayye qoradha fi barsisooni waan nama gaddaara (taziiya) ta’aan fakkata, malee lenjii hin fakkatu.”
“Yunivarsiitii Wallaggaa campus Gimbiitti, yeroo amma kana qaamni ani OPDO dha jedhu waltajjii geggeessaa jirurratti waa’ee ajjeechaa lammii keenyyarratti raawwate hundee seerummaa itti uuffisuuf(uumuuf) yeroo yaaleetti iyya galma guutuu fi teessuma reebuun akka afaan hin saaqqanne waan beektu hin qabdu callisi dhiisii jechuun afaan qabsiisaniiru!!”
Fascist Ethiopia’s regime is conducting genocide on Konso people. #KonsoProtests#OromoProtests
Fulbaana 18,2016 Godina Wallaggaa Horroo Guduruu, Magaalaa Kombolchaa Daandiin Konkolaataa Kana Fayyaata.
September 18, 2016By Qeerroo
#OromoProtests – September 14, 2016, click here for morenews
Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo (SQ) Qophii Fulbaana 13, 2016September 13, 2016
Naqamtee Cufaa Jiru,Diddaan Ummataas Itti Fufee TPLFn Burjaajessaa Jira.
Godina Shaggar Kaabaa Aanaa Yayyaa Gullaallee Keessatti FXG Itti Fufee Oole.September 13, 2016
KUNI KUTANNOODHAA. QERROO ADA’AA BARGAA.
Oromia’s freedom flag everywhere in Oromia. #OromoProtests 11 September 2016
” Irrraa Hin Bitiin, Itti Hin Gurguriin ” Hawwisoo Qeerroo Sochii Gabaa Lagachuu Bara 2014 .
#OromoProtests and Market Boycott continued unabated, September 11 and 12, 2016.
Commercial bank boycott in Arjo ( East Wallaggaa, Oromia). “Kuni hiriira baankii daldala xoophiyaa Arjooti”. #OromoProtests 10 September 2016
#OromoProtests, Boycott Continued Unabated, September 10, 2016
#OromoProtests in Sulultaa, Oromia
Oromiyaa Guutuu Keessatti FXG Jabaatee Itti Fufee Jiraachuu Qeerroon Gabaase.
Fulbaana 10,2016 Wayita kana akkuma beekamu haalli ormiyaa keeysa jiru danqaa fi ummanni Oromoos yeroo itti bilisummaa isaa gonfatu fakkaatee jira.
Fooliin Bilisummaa kan urgaa’aa jiruudha. Torban kana sababan dirqama hojif bobbahee tureef caasaan odeesa sochiiwwan Qeerroo fi uummataa kan godinoota hundaa irraa yeroo kana sochiin hubatamu haala jabaa tahuun kan diina abdii kutanna dhumaa fi uummatas kan boonsu tahuun shakkii kan hin qabne tahee mul’ateera.
1. Godina Qellem wallaggaa irraa magaala Dambi Doolloo fi naannowaa ishee guutummaatti FXG dhowee uummanni magaalicha dhuunfatee kan ture Wayyaaneen humna lakkoofsa guuddaa fi meeshaalee gurguddaa bobbaasuun uummata irratti dhukaasni banamee kan jiru guyyoota muraasa asitti haga ammaatti namni 5n wareegamuun beekamee jira. ijoolleen lama magaala DD ganda 07 keessatti yoommuu tahu kaanis baadiyaattii miidha jabaan uummata irra gahaa jiraatuun odeessi dhufe addeessa. Uummanni FXG baadiyaa keessatti finiinsuun daandii cufuu, riqicha addaan kutuu fi kkf irratti hojeta jira. Fulbaana 6 kaasee magaalli Dambi Doolloo humni uummataa waan isaan sodaachiseef uummanni manaa akka gadi hin baane gootee jirti. Humna addaa daangaa irraa dhufe achi buusuudhaan Qeerroo dhabamsiisuuf meeshaa kanneen akka matiriyeesii fi kkf konkolaataa hedduudhaan magaalicha nannawuun uummata doorisaa turaniiru. Sababa kanatti uummanni guyyoota sadan kana mana keessaa gadi bahuu hin dandahu har’a garuu manaa bahuun garuu bittaanii fi gurgurtaan akka hin jirre magaalicha keessa gabaafamaa jira. Inni kun waggaa kana guutuu irratti hojjenna jechuun naggaadoni itti walii galaa jiran. Tajaajila geejjibaas kennuun itti fufiinsaan akka tahu uummanni ammallee waamicha isaa waliif dabarsaa jira. namoni hedduunis hidhaatti guuramaa jiru.
2. Magaala shawaa lixaati hojjettootni baatii tokkoon dura hojii dhaabanii jiru. Godina kana keessatti Amboo, Geeddoo, Gudar, Mugar, fi kkf keessatti duulli hojii dhaabuu milkaawee waan jiruuf Qeerroon caasaa isaa toohachuudhaan kan warraaqsicha butachuuf barbaadanis toohannoo caasaa tolchuudhaan hojii itti fufsiisanii jiru.
Konkolaattotni hedduun barbaadeeffamaniiru. Yeroo kana waraqaan Qeerroodhaan barreeffames ABO fi WBO kan leellesu Shggar lixaatti haalan bittimfamee argama. Inni kun halkan halkan waan hojjetamuuf humni waraana agaazii jedhamu magaalota sana keessa buufatee jira.
hojiin tikoota dina achi keessa buufatanii jiran halkan waraqaa Qeerroo faca’e bulu ganama osoo uummanni hirribaa hin kahin funaanuudha. Haala kanaan uummanni qabamee qabamee gadhiifamaa jira.
3. Wallagga lixaa Gimbii, Najjoo, Mandii, Hoomaa fi kkf keessatti FXG uummataa jabaatee itti fufeetu jira. godinoota kana keessatti haaluma kana wal fakkaataadhaan diddaa gibiraa, gabaa dhiyeessuu, walgahii diduu fi kkf kan wal irraa hin cinneen itti fufeetu jira. akka lixa Oromiyaa waluma gala injifannoo gurguddaatu jira gama FXGtiin gama tarkaanfii uummata keessaa fi humna FXG keessatti ijaaramee socho’u kan of duuba hin deebineen gumaa gootota waregamanii baasaa jiru, kan adaba basaastota diinatti kennaa jiru magaalota oromiyaa garagaraa keessatti haala wal fakkaadhaan itti fufee hojjetamee jira.
4. Naannoo FF fi Shaggar kaabaa dabalatee godinoota addaa keessattis Qeerroon uummanni keenya dhiyeessii garagaraa gara FF dhiyeessu irraa deebisaa jira. waggaa kana akkuma karoora keenyaatti dhiyeessii kutuu ,yeroodhaa yerootti daandii cufuu, tarkaanfii fudhachuu, walgahii diduu, gibira kaffaluu diduu, fi kkf mirkaniidha. Shawaa kaabaa fi naannoo amaaraa kan geessu daandiiwwan bakka hedduutti citanii jiru. Amma mootummaan wayyaanee kufaatii isaa mirkaneeffataa dhufeera. Godinoota biroo oromiyaa keessatti FXG sadarkaa baadiyaatti itti fufee jira waggaa dhufaa jiru kana manneen barnootaa kamuu oromiyaa keessatti akka hin gaggeeffamne akkuma murtii Qeerroo olaanaa irraa darbetti caasaadhan gadi buhee uummanni oromoos FXGf of qopheessaa jira.
September 7, 2016 By Qeerroo
Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo (SQ) Qophii Fulbaana 6, 2016
Qeerroon Bilisummaa Oromoo kan magaalaa Naqamtee fi naannoo keessatti argaman fulbaana 05/2016 halkan guutuu barruullee warraaksaa maxxansaa fi bittinsaa bulan.
September 6, 2016 By Qeerroo
Waraqaan kun uummanni magaalaa Naqamtee fi naannoo ishees Ficila Xumura Gabrummaa FXG akka finiinsaniif waraqaan waamichaa godhameefii jira.
Barruulleen warraaksaa dhimma hidhamtoota mana hidhaa Qilinxoo iirrattis haalaan guutummaa magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee keessa facaafamaa bulee jira.
– Hidhamtoonni balaa abiddaa qilinxootin du’an uummatatti haa mullifaman.
-Hidhamtoonni rasaasa Wayyaanneetiin boqotan uummatatti haa agarsiifaman.
-Biyya isaa irratti abbaan biyyummaa Oromoo haa kabajamu.
-Abbaan biyyaa Oromoodha.
-OPDOn farra qabsoo bilisummaa Oromooti.
-OPDOn diina uummata oromooti jechuudhaan ,dhaadannoolleen kunneen facaafamaa bulanii jiru.
Mootummaan Wayyaanees naasuu keessa seenuun uummata nagaa karaa irra deeman tumanii manatti olseensisaa jiru.
Uummanni magaalaa Naqamtees guyyaa keessaa naannoo sa:a 11 iirraa kaasuun guutummaan guutuutti suuqii cufuun ,taaksiin akkasumas konkolaataan kam iyyuu karaarra akka hin deemneef walii galteedhaan murteessuun jibba mootummaa Wayyaaneef qaban mullisanii jiru.
Mootummaan gabroonffataan Wayyaanees kirkirffannaa keessa seenuun uummata magaalaa Naqamtee namni tokko suuqiis ta’u kaaffeen,manni nyaataa akka hin cufne jechuun doirsisaa jira.
Godina Arsii Magaalaa Waabee Eddoo Keessatti Gubachuu Mana Hidhaa Qilinxoon Sababeefachuun Ummanni Diddaa Itti Fufe.
Godina Arsii magaalaa Waabee Eddootti Qeerron Bilisummaa Oromoo fi ummanni guyyaa har’aa 4/9/2016 Gochaa sanyii duguuggaa wayyaanen mana hidhaa qilinxootti raawwatte sababeeffachuun mormii godhaa oolun daandii magaalattii seenu kallattii hundaanuu cufaa oolaniiru.Karaa biraatin asuma godina arsii magaalaa Boollootti Qeerron basaastuu wayyaanee Taammiraat Hayluu Assaffaa jedhamurratti gaafa3/9/2016 halkan naannoo saa’atii 6:00 irratti mana isaatii gadi baasun tarkaanfii irratti fudhataniin guyyaa har’aa 4/9/2016 wareegamuun isaa himameera.
Kana malees Godina Wallaggaa magaalaa Jaarsoo keessatti Qeerroon Bilisummaa barruulee warraaqsaa ummataaf raabsaa ooluu fi jala deemtota Wayyaanee akeekachiisaa turuun beekame.
Warraaqsi Fincila Xumura Gabrummaa(FXG) Godina Wallaggaa Magaalaa Naqamtee Keessatti Halkan Kana Bifa Addaan Ka’ee Jira. Wayyaaneen Dhukaasa Banee Jira.
Warraaksi biyyoolessaa galgala sa’a 1:30 irraa kaasee guutummaan magaalaa Naqamtee raafamaa jira. Humni federaalaas uummata irratti dhukaasa banuun uummata goolaa jira. Humni kora bittineessaas magaalaa naqamtee keessaa naannoo boordii jedhamutti uummata rebaa jira. kaan immoo konkolaataatti naqanii butanii badaa jiru. Uummanni akka malee reebamaa jira.
Amma galgala kana Magaalaa Naqamtee Naannoo Boordiitti Uummata nagaarratti sodaa boriitiif dhukaasi banamee jira.Namoonni jireenya isaanii fooyyeffachuuf karaarra daldalanii bulanirra balaan Dhaqqabuu mala,ammaaf addan baafannee hin jirru.Qorachaa jirra nu hordofa waan dhalatu hin beekamu.
Boycott business of the Woyane ( fascsit Ethiopia’s regime), September 2016
A letter from Oromo political prisoners in Qilnxoo, #OromoProtests September 2016
Duula Diddaa Bittaa Gurgurtaa ilaalchisee xalayaa hogganoota mana hidhaa Qilinxoo irraa ergame.
DIINAGDEEN QAAMA QABSOO KEENYAATI.
Waggaan baranaa kun yoomiyyuu caalaa ilmaan keenya kan itti dhabane, kumaatamoonni kan itti hidhaman, hedduun as buuteen isaanii kan itti dhabame waan ta’eef lammiilee keenya kanneen yaadachuuf guyyoota gaddaa labsineef deebii ajaa’ibsiisaa kennitanii jirtu.Gocha kanaan diinni na’eera. Nutiifi sabni keenya boonneerra. Quuqamaafi jaalala ummata keessaniif jecha gatii guddaa kafaltanii deebii waamicha keenyaaf laattaniif kabaja isinii qabnuufii galata keenya isinii dhiheessuu barbaada Galatoomaa, ulfaadhaa.
Yoo waldhageenye, walitti birmannee, walbira dhaabbanne salphinni nurra jiru kun nurra hin bubbulu, bubbulus hin qabu. Tokkoon tokkoon qajjiisa funyoo morma keenyatti maramee jiru kukkunnee hanga bilisoomnutti waldhaga’uufii walbira dhaabbachuun keenya itti haa fufuu jechuudhaan waamicha biraa qabannee dhihaachuun dirqama nutti ta’ee jira.
Akkuma beektan har’as ajjeechan nurraa hin dhaabbanne, hidhaan itri fufee jira, Ambulaansonni deessotaaf kadhaan biyyoota alaa irraa argaman dargaggoota keenya akka allaattii butanii fiiguuf gandeen keenya keessa wal maruu itti fufanii jiru. Haati ilma deesse har’aas imimmaan ishee hin qoorre. Maqaan maastar pilaanii yoo ka’uu baateeyyuu har’aas ummata keenya lafa isaa irraa buqqisuun hin raawwanne.
Namoonni ilmaan keenya ajjeesan seeratti nuu haa dhihaatan jennee osoo gaafachaa jirruu dheengadda hagayya 16 Muummichi ministeeraa ifatti badhaafamanii jiru. Manni maree jiddu galeessa ADWUI hagayya 18 – 22 tti yaada yeroo irratti marii gaggeessen waa’ee daangaa Tigraayifii naannoo Amaaraa ilaalchisee hiika itti kennuuf murtii dabarsee jira. Karaa biraa garuu waggaa tokko guutuf nagaya dhabiinsaaf sababa kan ta’eefii wareegama lubbuu hedduu kan gaafate dhimmi maastar pilaanii daangaa waliin kan walitti qabate ta’uusaa osoo beekuu maqaallee osoon dhahin bira darbee jira.
Mata dureen kun osoo hin ka’in hafuunsaa yoo xiqqaate waan sadii nutti garsiisa.
1ffaa, Ajjeechaan ummata keenya irratti raawwate sirrii ta’uu isaafii akka itti fufu murtaa’uu isaa agarsiisa.
2ffaa, ummanni kun humaa fiduu hin danda’u jedhamee tuffatamuu isaa mul’isa.
3ffaa, paartii biyya bitu sana keessa bakka bu’aan ummata oromoo kan hin jirre ta’uusaa agarsiisa. Eeyyee kan nuu falmu hin jiru.
Yeroo ammaa kana bulchitoonni keenyaa fi ergamtoonni isaanii qabeenya nusaamaniin alaa fi mana isaanii guuttatanii waggaa haaraa sirbaafi gammachuun simachuuf qophaawaa jiru.
Nutimmoo akkamiin simachuuf deemna? Waggaan itti deemnu kun waan haaraa nuufidee akka hin dhufne mallattoo isaa argaa jirra.
Uffata haaraa bitannee nyaata gaarii nyaannee dhugaatii gaarii dhugnee ergaa “baga geessee” walii dabarsinee bakka bashannanaa deemnee gammachuun dabarsuuf sababa hin qabnu. Haala kanaan yoo dabarsine fooniifii dhiiga ilmaan keenyaa akka soorannetti lakkaawama. Ummanni bilisummaa hin qabne wantoota akkanaa raawwachuun irraa fokkisa, nituffachiisaas. Tokko tokkoon qarshii harka keenyaa bahu eenyu harka gala? Maaliif oola laata? Naanna’ee naanna’ee rasaasa ilmaan keenya ittiin du’an bita, mana hidhaa isaan itti hidhaman ijaara, abbootii irree aangoo irra tursa, nuun ammoo bilisummaa keenya dheeressa.
Kanaaf diinagdeen qaama qabsoo keenyaa ta’uu qaba. Diinatti ulee kenninee na hin rukutin jennee kadhachuu dhaabuu qabna.
Wanti bilisummaa keenyaf hin taane qarshiin tokkolleen bahuu hin qabu, homaa nugochuu hin dandeessan jedhee mootummaa nutti dhaadatu waa gochuu akka dandeenyu yeroon itti agarsiisan amma ta’uu qaba. Karaa diinagdee malli ittiin mootummaa kanarra dhiibbaa gahan hedduutu jira. Ammatti kanneen armaan gadii hojirra akka oolchitaniif lafee ilmaan oromoo nuuf jecha wareegamaniin waamicha isinii dabarsina.
1, GABAA LAGACHUU.
Jalbultiin ayyaanaa kun yeroo itti ummanni keenya fedha isaaniitin ofsaamsisaniidha. Saamicha kana baroota dheeraaf keessummeessinee jirra amma garuu raawwachuu qaba. Guyyaa ergaan kun isin dhaqqabee kaasee hamma bituu diduufii gurguruu diduudhaan humna harka keessan keessa jiru agarsiisaa. Gurraachonni Ameerikaa konkolaachisaan adiin tokko dubartii gurraattii tokko adiif akka iddoo gadidhiiftu ajajee isheen didnaan morma qabee gadi darbate. Gurraachonni salphina kana fala dhaabbachuuf guyyaa tokkoof otoobus yaabuu lagachuuf murteessanii garuu guyyoota 381ffaa miila isaaniin deemuudhaan ulfina isaanii deeffatan. Nutimmoo salphina kana caalu baannee maalif waan qabnu facaasaa deemna? Gaandiin ummanni Indiyaa uffata warra biritish lagatee jibrii foo’atee, dhahee akka uffatu gochuudhaan saba isaa bilisummaa gonfachiiseera. Nutis midhaan keenya, jimaa keenya, buna keenya, horii keenya, damma keenya, dhadhaa keenya, walumaa galatti oomisha keenya gabaa baasuu dhiisudhaan akkasumas meeshaalee , uffata , nyaataa fi dhugaatii bituu dhiisuudhan badiinsa nutti deemaa jiru haa hir’isnuu.
2, ITIYOO TELEKOOMII LAGACHUU.
Mee guyyatti keessumaa yeroo ayyaanaa, nama dubbisuuf , sirba filachuuf, gaaffii gaafachuuf , gaaffii deebisuuf , marii irratti qooda fudhachuuf , baga geessee namaa dhaamuuf, kkf qarshii meeqa akka baafnu yaadaa. Isaan kun ummata bilisummaa hin qabneef barbaachisoodhaa? Mee isa guyyatti baaftan kana ammoo ummata keenya akkuma kana raawwatan yoo xiqqaate miiliyoona 15 ta’u meeqa akka baasu tilmaamaa. Kun hundi rasaasa ittiin duunu bituuf ykn nama nu’ajjeesu badhaasuf ooluu danda’a. Kana duwwaa miti. Dargaggoota keenya maqaaf mana murtitti deddeebi’aa jiran irratti ragaa ta’ee dhiihaachaa kan jiru ragaa teeleeti. Kanaaf haalli humnaa olii yoo numudate malee teelee lagachuudhaan maallaqa keenya haa qusannuu, bilisummaa keenya haa saffisnuu, adaba irraas haa oolluu.
3, BAANKII DALDALA ITOOPHIYAA LAGACHUU.
Qooda baankii daldala itoophiyaa fayyadamnu baankilee biroo yoo fayyadamne , galii mootummaa hanga tokko xiqqeessuudhaan humna isaa laaffisuu ni dandeenya.
Lammileen keenya biyya alaa jiranis gara biyyaatti maallaqa wayta ergan filannoo birootti akka fayyadamaniif waamicha isaaniif goona.
4, LOOTORII LAGACHUU.
Karaalee mootummaan ittiin maallaqa saamu keessaa tokko lootorii bifaafii maqaa adda addaa qabaniini. Kanaaf lootorii biyyoolessaas ta’ee kanneen achumatti soofanii carraa ofii ilaallatan bituu lagachuudhaan qabsoo karaa diinagdee keessatti qooda fudhadhaa.
5, GEEJJIBA LAGACHUU.
Konkolaattota naannoo tokkoo gara naannoo birootti daangaa qaxxaamuranii deeman kanneen magaalattii gara baadiyyaatti ykn Baadiyyaatii gara Magaalatti Meeshaa fi nama deddeebisan, Baajaajotaa fi Taaksii qaammee 1-5 fayyadamuu dhiisuudhaan mana akka ooltan ykn lukaan deemuudhaan qooda akka fudhattan isin yaadachiisa. Konkolaachiftoonnii fi Abbootiin qabeenya konkolaattotas ummata keessaniif aantummaa akka agarsiiftan kabajaan waamicha isiniif dabarsina.
Akkuma hundumti keessan hubachuu dandeessan malli qabsoo nuti eegalle kun biyya kana keessatti baay’inaan hojirra kan oolee miti. Wareegama xixiqqaas kan nama baasisu ta’ee mul’achuu danda’a. Osoo uffata bitachuu danda’anii isuma duraan qaban qulqulleeffatanii yoo tarsa’es hodhatanii ittiin ayyaana oolun hin beekkamne. Waggaa haaraa ittoo lukkuu, Foon , dhugaatii malee simachuunis hin baratamne. Garuu jalqabamuu qaba. Wanti nurraa barbaadamu waan xiqqoodha, oftoo’achuu, fedhii ofii daangessuu, dhiibbaa aadaa fi ollaa jalaa bahuu, Qabsaa’aa kaayyoo qabu ta’uudha.
Mirga argachuuf wareegama kafaluun haaraa miti. Sabni aarsaa osoo hin baasin abbaa mirgaa ta’e hin jiru. Waggaa kana ummanni keenya tokko ta’ee seenaa hojjatee jira. Ammallee hanga cunqursaan nurraa kufutti malleen biroo heddutti fayyadamnee qabsoo keenya itti haa fufnuu. Har’aas borus diinagdeen qaama qabsoo keenyaa ta’ee itti fufa. Dhimma kana ummata hubachiisuuf dargaggoota irraa hedduutu eegama. Kan bilisummaa keenyaaf hin fayyadne qashii tokkollee hin baasnu!!
Hagayya 24 bara 2008
#OromoProtests 10 September 2016: Market Boycott 5th day continues.
#OromoProtests 9 September 2016: Market Boycott 4th day continues.
Barattooti Oromoo Boqonnaa Yeroo Gannaaf Yuniversitiilee Irraa Warratti Galan Waraana Agaaziin Qabamee Hidhamaa Jira.
Warraaksa biyyoolessaa guutummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiruun wal qabatee mootummaan gabroonfataan Wayyaanee ilmaan Oromoo sabboontota ta’an mana hidhaatti guuraa jira.
Fulbaana 08,2016 godina Wallaggaa lixaa aanaa Mana Sibuu ganda qonnaan bulaa Beengu’aa jedhaman keessaa dargaggoonni agartuu biyyaa ta’aniif saboontota ta’an gara mana hidhaatti guuramaa jiru.
Haaluma kanaan godina Wallaggaa lixaa aanaa Mana Sibuu ganda qonnaan bulaa Beengu’aa jedhamu keessaa dargagoonni Oromoo ganna kana boqonnaaf gara maatii isaaniitti galanii jiran gara mana hidhaatti guuramaa jiru.
Haaluma kannaan dargagoonni maqaan isaanii fi suuraan isaanii kanaa gaditti argamu magaalaa ganda qotee bulaa Beengu’aa jedhamu keessaa butamanii achi buuteen isaanii dhabamabamee jira..
Amboon Guyyaa Har’aa Kana Fakkaatti
Bishooftuu Keessa Guyyaa Har’aa Wayyaaneen Ummatatti Dhukaasaa Jirti.
Naqamte Guyyaa Har’aa
Godina Wallaggaa Horroo Guduruu Aanaa Abbaay Cooman Finca’aa Qeerroon Karaa Cufee Gabaa Lagachuun FXG Gaggeessaa Jira.
Godina Arsii Bulchaan Aanaa Qoree Namni Maqaan Mi’eessoo Duubee Jedhamu Waraana Agaazii Qabatee Ummata Irratti Ukaasisaa Jira.
Bulchaa Aanaa Qoree
Arsii Aanaa Qoree magaalan Qoree galgala kana 9,2016 dirree waraanaa fakkaattee jirti dhukaasni ummatarratti banamee namoonni hedduun rasaasa Agaazitiin rukutamanii jiru. Namni ummatarratti waraana bansiise bulchaa aanaa Qoree nama maqaan isaa Mi’eessoo Duubee jedhamu yoo ta’uu.Namoota rasaasan rukutaman keessaa kan maqaan isaanii barame
1,Dargaggoo Gammadaa Muddaa Tashitaa
2, Dargaggoo Sayyida Guyyee Galchuu
3, Dargaggoo Jamaal Tibboo kan jedhamaniidha
Kana malees Qoree fi Ashookatti daandin cufamaa jira waraanni konkolaataa jahaan gara qoree deemaa jira.
Gama biraan ummanni magaalaa Shaashamannee kanneen Wayyaanee jala kaachuun gabaa lagannaa didan irratti magaala keessa deemuun adaba barbaachisu kennaa akka jiran beekame.
Fulbaana 8,2016Warraaksi biyyoolessaa diddaa gabaa lagachuudhaan wal qabatee torbee kana magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee keessatti daran jabaatee itti fufuurraan kan ka’e mootummaan gabroonffattuun Wayyaanee rifannaa guddaa keessa seenuudhaan uummata magalaa Naqamtee fi naannoo ishee irratti dhukaasa banaa jira.
Guyyaa har’aa Fulbaana 7,2016 FXG Itti Fufee Magaalaan Naqamte Cal-Cal jettee Jirti.
Konkolaataan tokkoyyuu magaalaa Naqamtee keessa oliif gadi imalaa hin jiru. Suuqiinis manni nyaataas hunduu cufamanii jiru.
Mootummaan gabroonffattuu murna bicuu Wayyaanees naasuu guddaan shororkooftee uummata suuqii fi mana nyaataa irra deemuun doorsisaa jirti.
Uummannis sodaa tokko malee diddaa mootummaa Wayyaaneef qabu duula gabaa lagachuutiin mirkaneessaa jira.
#OromoProtests 8 September 2016: Market Boycott 3rd day continues.
#OromoProtests 7 September 2016: Market Boycott 2nd day continues. All shops are closed in Burayyuu, Naqamte, Bishoftu, Robe, Dodola, Ambo, Gudar, Gimbi, Galessa, Adaba, Najjoo, Mugii, Awaday, ……..
#OromoProtests Fulbaana ( September 6 2016): Godina Sh/lixaa, Aanaan Dirree Incinnii guyyaa kibxata har’a gaba gudda ture. Horii gaafa ,hoolota,dhadhaa kkf baayinaan kan dhiyaatu ture.
Hata’uu malee gaba dhisaatii manni jereenyaa yuu cufamee jira.
Namnii bakkee dhaabatullee hin jiru,badiyaadha dogogoree llee kan dhufe hin jiru.
Ummanni sirrumatti walitti daberseera jechuudha.
Stores shut their doors in the busy city of Awaday the Khat capital, Oromia, 6 September 2016. #OromoProtests boycott the woyane.
Bank run in Dambi Doolloo, Oromia, 5 September 2016
Fulbaana 5,2016 Ummanni Magaalaa Dambi Doolloo qabeenya baankii Daldala Ethiopia keessaa qabu guutuutti baafachaa jira.
Boycott the fascist TPLF and its business in action. #OromoProtests at Naqamte 6 September 2016
“Nuti qeerroon magaalaa naqamtee ummata baadiyaa hin dhaga’iin dhufaa jiraniif beeksisa haala kanaan qopheessinee karaa walakkaa dhaabnee jirra. isaanis kana dubbisuudhaan ofirra deebi’anii gara mana isaaniitti galaa jiru.”
Stores shut their doors in the busy city of Naqamte, Oromia, 6 September 2016. #OromoProtests
Baankiin daldala Ethiopia rakkoo Connection tu nu mudate jechuun ummata magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee mallaqa baasuu dhorke.
Warraaqsa biyyoolessaa FXG utuu wal irraa hin citiin ji’a sagalii oliif guutummaa Oromiyaa keessatti finiinaa tureen sirni Wayyaanee TPLF naasuu keessa seenuun waan qabdee lakkisu wallaalee uummata goolaa jira.
Guyyaa har’aa Fulbaana 5,2016 Baankiin daldala Ithiopiyaa magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee keessa jiru guutummaan guutuutti duwwaa ta’uu irraan kan ka’e sirni Wayyaanee rifaatuu guddaa keessa seenuun uummata magaalaa Naqamtee goolaa jira.
Rifannaa isaa kana irraa ka’uudhaanis baankii keenya rakkoo konneekshiniitu mudate jechuudhaan maallaqa uummataa akka isaan hin fudhanneef dhorkaa jira.
Haaluma kanaan uummanni magaalattiis harki caalu maallaqni isaa waan dhowwatameef baayyee rakkachaa akka jiran bira ga’amee jira.
Uummannis morma keenya laanna malee maallaqa keenya fudhannu malee hin gallu jechuun mormii kaasaa jiraachuun dhaga’amee jira.
‘Attacks on foreign firms in #Ethiopia reflect growing popular hatred for minority #TPLF regime that is steadily losing control.’ Herman J. Cohen
The Dutch company said crowds of people in the Oromia and Amhara regions torched flower farms as they targeted businesses with perceived links to the government. Flowers are one of the country’s top exports. 2nd September 2016
TPLF’s Dashen beer destroyed by protesters in Amhara state. 29 August 2016.
#OromoProtests 3 September 2016: People are rushing (Bank run) to take out their money from Commercial Bank of Ethiopia. This picture is taken from Kumsa Moroda branch in Naqamte, Oromia.
Dhaamsa FXG Birraa 2 bara 2016:
Maallaqa Keessan Baankii Daldala Itiyoophiyaa keessaa baafadhaa!
Akkuma beekamu bara mootummaan Dargii kufe kanneen maallaqa isaanii baankii mootummaa keessatti qusachaa turan kisaaraa galani hafani. Maallaqa isaanii tokko osoo hin argatin mootummichumaa wajjin bade.
Amma immoo maaltu ta’uuf deema?
Mootummaan wayyaanee mormii guutummaa biyyattii keessatti adeemsifamaa jiru dhaamsuuuf/laamshessuuf maallaqa hedduu akka baasaa jirtu ni argina. Kisaaraa guddaa keessa akka seentee jirtus addunyaa guutuutu dhugaa ba’aa jira. Maallaqi kadhaadhaan alaa galus mootummaa wayyaanee kanatti lubbuu deebisuu hin dandeenye. Mootummaan kun maallaqa uummati keenya baankii mootummichaatti kuufataa jiru fayyadamee ilmaan keenya poolisii Agaaziitiin fixaa jira.
Mootummaan kun bitintiraa jirti. Horsossooftee jirti. Kufaatiin ishee dhiyaateera. Kanaafuu, namoonni baankii daldala Itiyoophiyaatti kuufachaa jirtan hatattamaan utuu maallaqa keessan hin dhabin baankiilee Oromiyaatti dabarfadhaa.
Uummati keenya biyya alaa jirtan immoo adaraa gaafa maallaqa firootaa fi maatii keessanii ergitan baankii daldala Itiyoophiyaa hin fayyadaminaa!
Dabalataan maallaqa keessan baankii mootummattii wayyaanee kana keessaa baasuun dinagdee mootummichaas gadi buusee kufaatii ishee saffisiisa.
Kun qabsoo aarsaa osoo hin baasin godhamuudha. Baankii wayyaanee keessaa guuraa qullaatti hambisaa!
Ariitiin kisaaraa of oolchaa! Mootummaa wayaanee immoo kisaaraa keessa galchaa!
#OromoProtests 2nd September 2016:
“Godina Arsii liixaa Aanaa Dodolaa keessaatti woyyaaneen sodaa irraa kan ka’ee Maal akka gootuufi dhiistuus wolalte jirtii. ummataa sodaachsiuufjechaa meeshaa waraanaa kanaa fakkatuu magalaa keessaa asii achii ariaa ooltii. karoorri uguurtaa daldalaa kan mataa isii dhukubsee mootummaan woyyaanee ummataas waliigahii bahaa jechuudhaan keessaa deemtee kadhaataa jirtii. garuu waan nama ajaaibuu ummaanni keenya sodaa cabsee walii afoo dhabachaa jiraa.”
“Shawaa Bahaa Aanaa Boossat gandoota Rukeechaa Boqoree, Dongorree Nayyee, Dongorree Furdaa,Hurufaa Kukkurfaa, Rukeetti akkasumas Dongorree Callee Araddaa jedhamanitti halkan sadeessoof poolisii Aanaa, Federaala fi jiraattota giddutti lolli adeemaa jira.Haala dhukaasni humnoota nageenyaa fi ummata giddutti baname keessatti hidhattooni gandaafii caasaan nageenyaa ummatattii hindhukaasnu jechaan ummata tumsaa jiru.”
#OromoProtests mass solidarity rally in Berlin, Germany September 2, 2016.
Fuulbana (Birraa) 2 bara 2016 Hiriirri deeggarsa FXG magaalaa Berlin, German keeysatti gaggeeyfamaa oole.
Solidarity with #OromoProtests at European Parliament at the conference/hrearing on crisis in Ethiopia, #OromoProtests, #AmharaProtests and land grabs in Afar state. 2nd September 2016
Hagayya 2 bara 2016 Gamtaan Awurooppaa Paarlaamaa Keessatti walgahii wa’ee yakka dhimma Oromo irraattii TPLF/EPRDF saba Oromoo fi Amahara akkaasumaan sabaa fi sabbonttotaa Ethiopia daballatee duguuggaa sanyii balleessuuf raawwatee fi Saamicha lafa Itoophiyaa keessatti gaggeffamuu keessumattuu Saamicha lafa Affaar irrati TPLF gaggessu irrati Marii guddaan gaggeeffameera.
#OromoProtests 2nd September 2016,Qobboo, East Hararge, Oromia : Funeral service for Saladin Shakim, who was wounded on the grand rally and died 1st September 2016.
TRT WORLD Ethiopia’s Oromo Protesters
#OromoProtests 31 August 2016: Cruelty of the TPLF
You might recall the report about killing of 15 farmers in West Hararge, masala District Choma village over the last four days. You also remember reading how the military prevented people from burying the dead and helping the wounded. Today they are dressing body of dead civilians in military uniform and video taping it. They want to make fake documentary claiming they killed armed combatants. Jawar Mohammed
Guyyaa hardhaa ilmaan Oromoo 15 Harargee Lixaa Aanaa Masalaa Araddaa Coommaa keessatti ajjeefaman san reeffa isaanii huccuu waraanaa offisuun fiilmii sobaatiif viidiyoo waraabaa jiran. Jawar Mohammed
The TPLF has continue indiscriminately mass killings of the peace loving Oromo people everywhere throughout Oromia.
The following 15 innocent Oromo people were killed by Agazi soldiers (Tigray People’s Libration Front) in Choma village , Masala District, West Hararge on August 27, 2016
Our thoughts are with all the victims relatives and families.
[…] Click here for #OromoProtests report 1- 30 September 2016 […]
10.	prev - August 29, 2017
11.	Oromia: #OromoProtests:#OromoRevolution: Gabaasa Fincila Xumura Garbummaa (FXG) Oromiyaa 2017 (August) | OromianEconomist - September 1, 2017